ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ KRC Genk
ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ KRC Genk
12 Oct 2018 . 3:42 PM
ဘယ်လ်ဂျီယံကလပ် KRC Genk အသင်းဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးပြီးသား အသင်းမဟုတ်ပေမယ့် အစိမ်းသက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအသင်းက အခု ကမ္ဘာ့အဆင့်ဝင် ဘောလုံးသမား အများကြီးကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာစီလိုနာရဲ့ လာမာစီယာလိုပဲ KRC Genk အသင်းရဲ့ အကယ်ဒမီကနေ အရည်အသွေးမြင့် ကစားသမားတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီကစားသမားစာရင်းကိုသာ ချပြရင် ယုံတောင် ယုံနိုင်မှ မဟုတ်ဘူး။ အခု မန်စီးတီးအသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ KRC Genk လူငယ်အကယ်ဒမီထွက်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အံ့သြသွားမယ်။ ဒီဘရိုင်းနားဟာ KRC Genk စီနီယာအသင်းအတွက် ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့ပြီးမှ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ရောက်ရှိခဲ့တာပါ။
နောက်တစ်ဦးကတော့ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ လက်ရှိဂိုးသမား ကော်တိုအာ Courtois ပါပဲ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ KRC Genk အကယ်ဒမီကို စရောက်ခဲ့တဲ့ ကော်တိုအာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ စီနီယာအသင်းနဲ့အတူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမားဘ၀ စတင်ခဲ့ပြီး (၂)နှစ်အကြာမှာပဲ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ ဒီကစားသမားတွေပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
ဘန်တီကီ Benteke ၊ စတီဗင်ဒီဖော် Steven Defour ၊ ကာရက်စ်ကို Carrasco ၊ အော်ရီဂီ Origi စတဲ့ ကစားသမားတွေ အားလုံးက KRC Genk အကယ်ဒမီထွက်ပါပဲ။ ဘောလုံးသမာတစ်ဦးအနေနဲ့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ကိုယ့်တက်လမ်းကို ရှာဖွေတာက အပြစ်မဆိုသာပေမယ့် ဒီကစားသမားတွေသာ ဆက်ရှိနေရင် KRC Genk အသင်းရဲ့အနေအထားက ကြောက်စရာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရီးယဲလ်ကို အနိုင်ယူပြီးတော့ ချန်ပီယံဆုဖလားတောင် ရယူသွားမလားပဲ . . .
KRC Genk အသင်း လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားများ
1 Kevin De Bruyne (Man City) 2008-2012
2 Thibaut Courtois (Real Madrid) 2009-2011
3 Wilfred Ndidi (Leicester)2015-2017
4 Leon Bailey ( Bayern Leverkusen )2015/2017
5 Kalidou Koulibaly (Napoli) 2012-2014
6 Christian Benteke ( Crystal Palace) 2006-2007
7 Divock Origi ( Liverpool) 2001-2010
8 Steven Defour ( Burnley) 2004-2006
9 Yannick Carrasco (Atlético Madrid) 2005-2010
ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမားတှကေို ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ KRC Genk
ဘယျလျဂြီယံကလပျ KRC Genk အသငျးဟာ ပရိသတျတှနေဲ့ အရမျးရငျးနှီးပွီးသား အသငျးမဟုတျပမေယျ့ အစိမျးသကျသကျတော့ မဟုတျဘူး။ ဒီအသငျးက အခု ကမ်ဘာ့အဆငျ့ဝငျ ဘောလုံးသမား အမြားကွီးကို မှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့တယျ။ ဘာစီလိုနာရဲ့ လာမာစီယာလိုပဲ KRC Genk အသငျးရဲ့ အကယျဒမီကနေ အရညျအသှေးမွငျ့ ကစားသမားတှေ ထှကျပျေါခဲ့ဖူးတယျ။ အဲဒီကစားသမားစာရငျးကိုသာ ခပြွရငျ ယုံတောငျ ယုံနိုငျမှ မဟုတျဘူး။ အခု မနျစီးတီးအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ KRC Genk လူငယျအကယျဒမီထှကျဆိုရငျ ပရိသတျတှေ အံ့သွသှားမယျ။ ဒီဘရိုငျးနားဟာ KRC Genk စီနီယာအသငျးအတှကျ ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၂ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့ပွီးမှ ခယျြလျဆီးအသငျးကို ရောကျရှိခဲ့တာပါ။
နောကျတဈဦးကတော့ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ လကျရှိဂိုးသမား ကျောတိုအာ Courtois ပါပဲ။ ၁၉၉၉ ခုနှဈမှာ KRC Genk အကယျဒမီကို စရောကျခဲ့တဲ့ ကျောတိုအာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာတော့ စီနီယာအသငျးနဲ့အတူ ပရျောဖကျရှငျနယျ ကစားသမားဘ၀ စတငျခဲ့ပွီး (၂)နှဈအကွာမှာပဲ ခယျြလျဆီးအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့တယျ။ ဒီကစားသမားတှပေဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။
ဘနျတီကီ Benteke ၊ စတီဗငျဒီဖျော Steven Defour ၊ ကာရကျဈကို Carrasco ၊ အျောရီဂီ Origi စတဲ့ ကစားသမားတှေ အားလုံးက KRC Genk အကယျဒမီထှကျပါပဲ။ ဘောလုံးသမာတဈဦးအနနေဲ့ ရကွေညျရာမွကျနုရာ ကိုယျ့တကျလမျးကို ရှာဖှတောက အပွဈမဆိုသာပမေယျ့ ဒီကစားသမားတှသော ဆကျရှိနရေငျ KRC Genk အသငျးရဲ့အနအေထားက ကွောကျစရာကောငျးသှားပါလိမျ့မယျ။ နောကျဆုံး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ရီးယဲလျကို အနိုငျယူပွီးတော့ ခနျြပီယံဆုဖလားတောငျ ရယူသှားမလားပဲ . . .
KRC Genk အသငျး လကျလှတျခဲ့ရတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားမြား
by Naing Linn . 51 mins ago
စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ ချယ်လ်ဆီးကို အနိုင်ယူပြီး FA Cup ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ယူ
FA ဖလားနောက်တစ်ဆင့်တက်ရေးအတွက် စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ စီးချင်းထိုးမယ့် ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်ယူ
by Naw Hsel Hte . 20 hours ago
အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်က ခါးသီးစရာအမှန်တရားတွေအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ Nexlabs ရဲ့ CEO ကိုရဲမြတ်မင်း
ဘေးကင်းတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ဓမ္မတာလာခြင်းကို ရက်ရွေ့ကြည့်ကြရအောင်
Victoria’s Secret Model တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ
ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ သီးခြားစီရပ်တည်ကြတော့မယ့် Prince Harry နဲ့ Prince William
လက်ထပ်ချိန်အထိ စည်းစောင့်ခဲ့ကြတဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူကြိုက်များသူများ